သူငယ်ချင်းများ ဤ post ကို ပြန်ပြီးရှယ်ပေးခြင်းဖြစ် ကူညီစေချင်ပါတယ် အခုအဖိုးနဲ့အဖွားက ပဲခူးတိုင်းဝေါမြို့နယ် ဆက်သွားချုံကျေးရွာကပါ.... - Tameelay
သူငယ်ချင်းများ ဤ post ကို
ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ သား မောင်အောင်ခင်ခေါ်
မောင်ခင်အောင်ချိုအား ယနေ့ထိ သတိရတမ်းတပြီး
ပြန်လာနိုးနိုးနဲ့ မျှော်ကိုးနေမိ တုန်းပါ….
အခုဆို ကိုခင်အောင်ချို ပျောက်ဆုံးသွားတာ
၁၅ နှစ်တာ ရှိပါပြီး မိခင်ကြီးမှာလည်း အသက်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှ
မကြာခင်အချိန်အတွင်း မျက်လုံးမှ အလင်းတွေလည်း
ကင်းမဲ့စပြုနေပြီမို့ မျက်မကွယ်ခင် သားဖြစ်သူရဲ့ မျက်နှာကို
ရောက်ရာအရပ်မှ ရွာကိုအမြန်ဆုံး ဆက်သွယ်ပေးပါ
သားသမီးနဲ့မိဘ သားသမီးတွေ ဘာအကြောင်းနဲ့
မိဘကို မေ့ခဲ့မေ့ခဲ့ မိဘကတော့ ကိုယ့်သားသမီးကို
ရင်မှလွယ်ဖွား မိဘနှစ်ပါးအား အစဉ်သနား
ဤ Post အား Share Like လို၍ တင်ရခြင်း
Shre လိုပါက Share နိုင်ပါတယ်
မ Share လိုလည်း copy ယူ ၍ တဆင့်ပြန်လည်
မျှဝေပေးကြပါလို့ သူ့ရဲ့ မိဘနှစ်ပါးကိုယ်စား
ကျွန်တော် ကျွဲကျောင်းသားမှ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်…
Credit : Myo Myint Oo
သူငယျခငျြးမြား ဤ post ကို
ပြောကျဆုံးသှားတဲ့ သား မောငျအောငျခငျချေါ
မောငျခငျအောငျခြိုအား ယနထေိ့ သတိရတမျးတပွီး
ပွနျလာနိုးနိုးနဲ့ မြှျောကိုးနမေိ တုနျးပါ….
အခုဆို ကိုခငျအောငျခြို ပြောကျဆုံးသှားတာ
၁၅ နှဈတာ ရှိပါပွီး မိခငျကွီးမှာလညျး အသကျကွီးလာသညျနှငျ့အမြှ
မကွာခငျအခြိနျအတှငျး မကျြလုံးမှ အလငျးတှလေညျး
ကငျးမဲ့စပွုနပွေီမို့ မကျြမကှယျခငျ သားဖွဈသူရဲ့ မကျြနှာကို
ရောကျရာအရပျမှ ရှာကိုအမွနျဆုံး ဆကျသှယျပေးပါ
သားသမီးနဲ့မိဘ သားသမီးတှေ ဘာအကွောငျးနဲ့
မိဘကို မခေဲ့မခေဲ့ မိဘကတော့ ကိုယျ့သားသမီးကို
ရငျမှလှယျဖှား မိဘနှဈပါးအား အစဉျသနား
ဤ Post အား Share Like လို၍ တငျရခွငျး
Shre လိုပါက Share နိုငျပါတယျ
မ Share လိုလညျး copy ယူ ၍ တဆငျ့ပွနျလညျ
မြှဝပေေးကွပါလို့ သူ့ရဲ့ မိဘနှဈပါးကိုယျစား
ကြှနျတျော ကြှဲကြောငျးသားမှ မတ်ေတာရပျခံပါတယျ…
အေးမြတဲ့သဘာဝလေကိုရှုရှိုက်ရင်း ပကာသနမပါ ကျယ်ဝန်းတဲ့လယ်ကွင်းပြင်က မင်္ဂလာပွဲလေး
အေးမြတဲ့သဘာဝလေကိုရှုရှိုက်ရင်း ပကာသနမပါ ကျယ်ဝန်းတဲ့လယ်ကွင်းပြင်က မင်္ဂလာပွဲလေး စစ်ကိုင်းတိုင်း မော်လိုက်မြို့နယ်ညောင်ဝန်းရွာနေ ကိုဇော်ခင် (တမူးစည်ပင်လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာ) (ဦးပေ+ဒေါ်မြရှုတို့၏ ယခင်ဘ၀က လူဝင်စားသား) ယခုညောင်သပြေရွာ ဦးချစ်ဆွေ+ဒေါ်ခင်အေးတို့၏သားနှင့်တောင်ကုန်းရွာနေ ဦးကျော်မောင်+ဒေါ်ခါတင်တို့၏သမီး မနှင်းမိုး(B A Eco)တို့၏ တောင်ကုန်းရွာလယ်ကွင်းပြင်က မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲလေး (ထူးခြားချက်က ဒီသတို့သားအကိုကအတိတ်ဘ၀ကမိသားစုဝင်တွေကိုမှတ်မိပြီး အားလုံးကိုပြန်ပြောနိုင်ပါတယ်) ဓာတ်ပုံ သိမ့် ပန်းကမ္ဘာ …
မကြံ​ကောင်းမစည်​ရာ ယုံတဲ့သူတွေကလံယုံကျတယ် ဒုက္ခတွေတော့ တွေ့တော့ မကြောက်မရွံ့ နဲ့ ဗုဒ္ဓ၀င်စားသူဆိုပြီးလိမ်​ညာ​နေသူတစ်ယောက်အကြောင်း
မကြံ​ကောင်းမစည်​ရာ ကဗ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှ ဗုဒ္ဓ၀င်စားသူဆိုပြီးလိမ်​ညာ​နေသူတစ်ယောက်အကြောင်း ဗုဒ္ဓ၀င်စားဟု လိမ်ညာနေခြင်းအကြောင်း “ကဗ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှ ဗုဒ္ဓ၀င်စားသူတစ်ယောက်အကြောင်း” အသက်အားဖြင့်၆၅ နှစ်အရွယ်ရှိအမျိုးသားတစ်ယောက်က သူ့ကိုသူ ဗုဒ္ဓ ပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီး နောက်လူ့ပြည်မှာပြန်လည်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးပြောနေပါတယ်။ သူ့ရဲ့အပြောအဆိုတွေက အကွကျတိကျအောင်ပြောဆိုနိုင်တဲ့အတွက် ကဗ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှ နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်တွေကအစ ယုံကြည်တဲ့အပြင် အချို့သောဘုန်းတော်ကြီးများတောင် သက်ဝင်ယုံကြည်ကြတဲ့အတွက် ပူဆော်ခြင်း အလှူဒါနပြုလုပ်ခြင်းများနဲ့ သူ့ရဲ့မိန့်ကြားချက်မှန်သမျှကို ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ နာခံနေကြပါတယ်။ …
တစ်ပတ် အတွင်း ဘီပိုး လုံးဝပျောက် စေမယ့် နည်းလမ်းကောင်း တကယ်ကောင်းမွန်ပြီး ငွေကြေးအမြောက်အမြား ကုန်ကျစရာမလိုသည့် နည်းလမ်းလေးဖြစ်လို့ တစ်ဆင့်မျှဝေ တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ Share လုပ်ကာ မျှဝေပေးခြင်းဖြင့် အာယုဒာန ကုသိုလ်ယူနိုင်ကြပါသည်။ ရောဂါကုထုံး (၁) စပါးလင် လိုအပ်ပါတယ်။ (၂) စပါးလင်ကို ရေစင်အောင်ဆေးကြောပါ။ (၃) …